Kadib barbarihii Barcelona ay xalay la gashay Las Palmas, Tababare Zidane oo hunguriyeynaya ku guulaysiga La Liga – Gool FM
Kadib barbarihii Barcelona ay xalay la gashay Las Palmas, Tababare Zidane oo hunguriyeynaya ku guulaysiga La Liga
Liibaan Fantastic March 2, 2018
(Mdarid) 02 Maarso 2018 Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayuu hunguri ka soo galay in kooxdiisu ay ku guulaysan karto xiliciyaareed kaan horyaalka Spain.
Barbarihii xalay Barcelona ay lagashay Las Palmas ayaa keenay in tababare Zidane uu ka shalaayo guul daradii kooxdiisa ka soo gaartay Espanyol.
Wuxuuna sheegay inay suurogal tahay in kooxdiisu ay ku guulaysato La Liga xiliciyaareed kaan maadama axada Barcelona ay la ciyaarayso Atletico Madrid oo ay dhici karto in laga adkaado.
“Kadib guul daradii kulankii Espanyol waxaan dareemay caro laakiin markii aan arkay natiijada kulankii Barcelona aad ayaan u sii carooday” ayuu yiri tababare Zidane ka hor kulanka habeen dambe ee Getafe.
“Waxaan rumaysanahay in ku guulaysiga La Liga uusan mustaxiil ahayn, laakiin way adag tahay, buugaygu ma qoro waxaas ma dhici karaan, sidaas darteed waa wax dhici kara (ku guulaysiga La Liga ee xiliciyaareed kaan)”.
“Tusaale ahaan, fiiriya Atletico Madrid, yaa filayay in farqiga dhibcaha uu noqon doono kaliya 5-dhibic” ayuu sii raaciyay tababare Zidane oo markaan diyaar u ah inuu u dagaalamo horyaalka inkasta oo hogaanka uu u jiro 15-dhibic.
Wuxuu guursaday gabar xanuunsan, wuxuu quudiyay agoon, wuxuu badbaadiyay Eey (Baro laacibka ugu biniaadanimada fiican ciyaartoyda yurub)
PSG oo qorshaynaysa inay ka farxiso laacibkeeda dhaawacan ee Neymar kulanka Real Madrid